Skype မှာ မြန်မာဖောင့် ပေါ်အောင် | အိမ့်မှူးသော်
အရင်ဆုံး Options ကိုသွားပါ။
ပြီးရင် IM&SMS ကိုကလစ်ပေးပါ။
အဲဒီမှာ IM appearance ဆိုတာကိုကလစ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Change font ဆိုတာကို ကလစ်ပေးပါ။
Font box မှာ Zawgy-One ကိုရွေးပါ။ အိုကေ ပေးပါ။ ပြီးပါပြီ။
Usually I don't read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great article.
thet paing 1:41 PM